MUUQAAL: Madaxweyne Farmaajo oo Kormeer ku Tegay Bakhaarada keydka Saadka Ciidamada iyo wuxuu ku arkay - Hablaha Media Network
MUUQAAL: Madaxweyne Farmaajo oo Kormeer ku Tegay Bakhaarada keydka Saadka Ciidamada iyo wuxuu ku arkay
HMN:-Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa kormeer ku tegay bakhaarada keydka raashinka ee saadka ciidamada dowladda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa intuu uu ku guda jiray kormeerka bakhaarada saadka ciidamada dowladda ayaa hubiyay tayada raashinka iyo in si siman loo gaarsiiyo ciidanka iyo qoysaskooda.
“Waxaan kormeeray saar ka mid ah kaydadka raashinka si loo xaqiijiyo tayada cuntada la siiyo ciidankeenna. Saadka waa in uu si siman u gaaraa ciidamada qalabka sida iyo qoysaskooda.” ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.